Shiinaha 20T warshad mashiinka barafka jaban iyo alaableyda | Nidaamka Barafka ee Herbin
Warshadayda caadiga ah ee 20T / day flake baraf ah waxaa lagu qalabeeyaa 10,000kg haanta barafka lagu keydiyo. Qashin-barafkaasi wuxuu keydin karaa 10,000kg oo jajab baraf ah. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhamaan barafleyda ay sameyso waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 20T / maalin. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa qolal baraf ka waaweyn.
Waa kuwan qaabeynta qaab-dhismeedka si aan u muujiyo mashiinka barafka jilicsan ee 20T / maalin ee leh qolka barafka.
Waa kuwan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee mishiinadayda 20T / maalin ee baraf dabacsan.
Aynu ku xisaabino mashiinka barafka flat 20T / maalin.
Haddii macaamilku doorto mishiinkeyga 20T / day flake, wuxuu keydin doonaa 2,190,000KWH koronto 10 sano gudahood.
Haddii macaamilku doorto mishiinka kale ee tikniyoolajiyadda miskiinka ee miskiinka xun, wuxuu lacag badan ku bixin doonaa inuu ku bixiyo isticmaalka korantada dheeriga ah ee aan macnaha lahayn, 2,190,000KWH
Immisa ayey le’eg tahay 2,190,000KWH koronto ee dalkaaga?
2,190,000KWH koronto ayaa qiyaastii US $ 300,000 ku jirta magaaladeyda.
Hore: 30T mashiinka barafka flake
Xiga: 10T mashiinka barafka flake